Udluliso lohlobo lweVoltage Stabilizer Abavelisi kunye nabaXhasi - China Uhlobo lokuDlulisa iVoltage Stabilizer Factory
I-TLCR (A) ye-US socket type voltage voltage stabilizer kunye noyilo olubengezelayo
I-TLCR yecandelo lesigaba esinye sasemzantsi socket SIYAZIBEKELA ULAWULO AC ombane ombane ngokuzenzekelayo, nto leyo elula kwaye enobunzima uyilo olukhethekileyo kwaye isetyenziswa kuphela kwilizwe elikhethekileyo laseMelika. Ngeli xesha sikhetha isiguquli sesikwere esiveliswa sithi ubukhulu becala samandla amancinci, indleko zayo ziphantsi kakhulu kwaye umthamo wayo mncinci kakhulu kwaye kulula ukuwuthwala. Sineziphumo ezine okanye ezisibhozo zokukhupha kwaye sikhetha ukudibanisa izixhobo ezininzi ngexesha elinye kunye nemali yokonga. Sivelise ibhodi yethu entsha ye-pcb ngo-ourselv ...
AVR SVR-AVR TLD series edluliselwe Voltage kungako LED Meter White
I-AVR / i-SVR yecandelo lesigaba esinye se-RELAY CONTROL AC ombane ozenzekelayo ombane, ongumlawuli wevolthi yesitayile esineemitha zemitha ye-analogue.Ukusetyenziswa kwamandla okuphantsi, ukhuselo lwevolthi ephezulu, ukhuselo lwevolthi ephantsi, ukhuseleko olugqithisileyo, ngaphezulu ukhuseleko -power, ukhuseleko phezu-lobushushu, ukhuseleko ukuvuza njalo njalo. Iyaqhayisa ngeentlobo ezininzi zemisebenzi yokhuselo edityaniswe kwimveliso enye. Inayo le misebenzi ilandelayo: ukulibaziseka kokukhetha ixesha, th ...
Uthotho lwe-SDR RELAY CONTROL AC oluzenzekelayo lwe-voltage stabilizer, nolukhetho olukhokelayo lwe-chip yaseMelika yinkampani yethu, isebenzisa inkqubo yekhompyuter yokwenza ikhompyuter yokulawula intshukumo esebenzayo yomatshini wonke. Iphucule ukusilela okuninzi kwento eyayisenziwa kwimo yombane kwaye yenza umgangatho weemveliso ukuba ube nokuthenjwa ngakumbi, ukusebenza kuzinze ngakumbi, umsebenzi ubenamandla ngakumbi. Imveliso inokusetyenziswa kwamandla aphantsi, ukhuselo lwevolthi ephezulu ...
I-TLD ejongene nokudluliswa kweVenkile yoQinisekiso lweVoltage
I-TLD uthotho lwesigaba esinye SOKUQHUBA ULAWULO LWE-AC oluzenzekelayo lwamandla ombane. Le yunithi yokuchaneka okuphezulu kunye nomlawuli ombane ozenzekelayo ngokupheleleyo yenzelwe kwaye yaveliswa ngokwamkela imigaqo ezenzekelayo yokulawula, yamkelwe kwilizwe liphela. Inxalenye ebalulekileyo kunye nezixhobo zonke zingenisiwe, ezibonisa uzinzo oluchanekileyo oluphezulu, ukugqwetha okuncinci kwemveliso, ukusetyenziswa kwamandla amancinci, ubungakanani be-compact kunye nobunzima bokukhanya.Ingasetyenziswa ngokubanzi kwilebhu yeekhompyuter, kwilebhu yokulinga kunye nakwiifektri, kwaye Umbono ...
I-TLBR 2000VA i-LED edluliselwe kwisiseko se-Euro socket voltage ngokuzenzekelayo
I-TLBR inqanaba lesinye isigaba sokwakha i-Europe RELAY CONTROL AC ombane oluzenzekelayo, sisixhobo sokuhambisa umbane taht sinokulungelelanisa umbane ngokuzenzekelayo.Umsebenzi wawo kukuzinzisa amandla ombane aguquka kakhulu kwaye angahlangabezani neemfuno zombane ngaphakathi kwawo setha ubushushu bexabiso, ukuze iisekethe ezahlukeneyo okanye izixhobo zombane, izixhobo zisebenze ngesiqhelo phantsi kwamandla ombane alinganisiweyo. I-Voltage stabilizer isetyenziswa ngokubanzi kwiindawo ezine-larg ...
© Copyright - 2010-2020: Onke amalungelo agciniwe. Iingcebiso - iveliso ezifakiwe - Imephu yendawo - Indawo ekuSelfowuni I-4kva Voltage Stabilizer, Voltage Stabilizer Ekhaya liphela, Voltage kungako Isixhobo, 2kva Voltage Stabilizer, Qaphela i-Voltage Stabilizer 5000va, IDigital Voltage Stabilizer yeAc, Zonke iiMveliso